Ogaden News Agency (ONA) – Shirweynihi Jaaliyadaha Pacific oo maanta guul kusoo xidhmay.
Shirweynihi Jaaliyadaha Pacific oo maanta guul kusoo xidhmay.
Shirkii Jaaliyadaha Somalida Ogadeniya ee Pacifig oo socday muddo laba maalmood ah 30-31 March ayaa maanta si guul ah ugu soo xidhmay magaalada Melbourn ee wadanka Australa. Shirkan oo ahaa mid aad loo soo abaabulay ayaa waxaa isugu yimid jaaliyado badan oo kakala yimid dhamaan wadamada Pacific oo ay u horeeyaan Jaaliyadaha Ogadeniya ee Perth, Sydney, Queensland, Victoria, Newzealand iyo jaaliado badan.
Shirkan oo u jeedadiisa koowaad aheyd in Waxqabadka Jaaliyadaha Somalida Ogadeniya ee Pacifiga lagusoo bandhigo laguna kala warqaato gude iyo dibadba. Ayaa sanad kasta lagu qabta goob kamid ah Wadanka Australia ama Newzealad. Shirkan ayaaa waxaa aad looga hadlay sida shacabka Somalida Ogadeniya ee ku nool wadamadaas Newzealand iyo Australia ay uga faa ideysan lahaayeen jaanisyada xoriyadood ay heystaan. Haday tahay dhan siyaasadeed iyo dhan bulsho islamarkaasna ay ugu faa ideyn lahaayeen dadkooda iyo dhulkooda aaan heysan xoriyada siyaasadeed iyo mida bulsho toona.
Kulankan ay jaaliyadaha Somalida Ogadeniya isugu yimadeen magaalada Melbourn ayaa qodobo badan oo dhaxal gal ah kasoo baxeen. kuwaas oo kor loogu qaadayo nolosha dadyawga somalida Ogadeniya ee ku nool Pacifiga islamarkaasna isbadal siyaasadeed oo xoriyad lagu gaadhsiinayo shacabka Ogadeniya horseedi kara.
Shirka ayaa si farxad nashaad iyo firfircooni halgameed ku dheehantahay kusoo dhamaaday. Waxaana la isku balansaday in Jaaliyadaha Ogadeniya Ee pacifigu isugu tagaan Wadanka South Afrika oo lagu qabanayo sanadkan Shirweynihii Jaaliyadaha Somalida Ogadeniya ee Adduunka.
Bahda warfaafinta ee ONA ayaa u hambalyaynaysa Jaaliyada Melbourn oo guul kasoo hoysay shirweynaha Ogadeniya ee Pacifiga.
Well done jaaliyada s/ogadenia ee Victoria n Oysu Melbourne. Waxaad qabateen shir aan caadi ahayn runtii. Waa guul noosoohoyatay.